၆ ရက်ကြာအကြမ်းဖက်မှုများ၊ ကျည်ဆံနှင့် မီးတောက်များကြားမှ မွတ်စလင်များရဲ့ အသံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Muslims in Yangon’s Thin Gan Gyune Threatened With Arson Attacks
သင်္ဃန်းကျွန်းမှ မွတ်စလင်ရပ်ကွက်များအား မီးကွင်းပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရ »
”ကျမတို့ကို အိမ်ထဲမှာပဲ နေရမယ်လို့ ညွန်ကြားထားပေမယ့် အိမ်တွေကို မီးရှို့ခံရတယ်” ဟု အသက် ၃၃နှစ် အရွယ် ကလေး လေးယောက်မိခင် ဖြစ်သူ အရှရာဘာနူးက ဆိုသည်။ ၎င်းသည် ကျောက်ဖြူ ကမ်းခြေရှိ မွတ်စလင် ရပ်ကွက်ကို အောက်တိုဘာ ၂၄ တွင်ဖြိုဖျက်ခံရ၍ ထွက်ပြေးလာသူ ဖြစ်သည်။
”ကျမတို့ ထွက်ပြေးတော့ ရဲတွေနဲ့ ရခိုင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်တာ ခံရတယ်။ အိမ်တွေကိုလည်း မီးမငြိမ်းနိုင်ဘူး”
”ရခိုင်တွေက ဓါးတွေနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်။ အိမ်တွေကို မီးရှို့တယ်။ ကျနော်တို့မှာ အဝတ်တထည်က လွဲလို့ ဘာမှ မကျန်ဘူး ဟု သဲချောင်းဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ရောက် ရှိလာသော ၆၃ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး ဇိုမီလာ မှ ငိုကြွေးပြောဆိုသည်။ ”`ပြန်လို့လဲမရတော့ဘူး” ဟုဆိုသည်။
“ရခိုင်တွေရ မီးရှို့နေတဲ့အချိန်မှာ ရဲတွေက ရပ်ကြည့်နေတယ်” ဟု အသက် ၃၀ အရွယ် အဗဒူအန်ဝါး က ဆိုသည်။ “ရခိုင်တွေက လိုက်ရိုက်တယ် ရဲကသေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ပင်လယ်ထဲကို ထွက်ပြေးတော့ လည်း နောက်က လိုက်ပြီး ပစ်တယ် ရိုက်တယ်။” ဟုဆိုသည်။
ခြေဗလာနှင့် ပြေးလာသော မွတ်ဆလင် ယောက်ကျား မိန်းမများသည် ရွှံ့ နွံထူထပ်သော သဲချောင်းကမ်းစပ် ပေါ်သို့ ကလေးများပွေ့ချီကာ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ကလေးများနှင့် ၄င်းတို့၏ ကျန်ရစ်သော ဥစ္စာအနည်ငယ် ကို သယ်ဆောင် လာ၏။ “လူတွေအများကြီး အသတ်ခံရတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်” ဟု ကျောက်ဖြူမြို့ မှ ထွက်ပြေးလာသူ အသက် ၅၄ နှစ် အရွယ် နိုရူးဟူစိန် ကပြောသည်။ “ကျနော်တို့ ပြန်မတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး ။ ဘယ်လိုလုပ်တိုက်ခိုက် နိုင်မှာ လဲ ကျနော်တို့က ရခိုင်ရွာတွေအလယ်မှာနေရတာ။ ကျနော်တို့ ကမ်းခြေဖက်ကို ထွက်ပြေးပြီး လှေစီး ပြီး လွတ်မြောက်လာကြတာပါ” ဟုပြောသည်။
“ကြောက်ရွံ့မှု့နှင့် မယုံကြည်မှု့တွေ ကို ထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ မြင်ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်း ပူပန်မိတယ် “ဟု ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် အာရှော့နီဂမ် မှ ၎င်းဒေသမှ အပြန်တွင် ပြောဆိုသည်။
Tags: Associated Press, Burma, Muslim, Rakhine State, Recreation, Refugee, Rohingya people, Sittwe
This entry was posted on October 29, 2012 at 11:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “၆ ရက်ကြာအကြမ်းဖက်မှုများ၊ ကျည်ဆံနှင့် မီးတောက်များကြားမှ မွတ်စလင်များရဲ့ အသံ”
October 29, 2012 at 12:03 pm | Reply
အောက်တိုဘာ ၂၈ ၊ ၂၀၁၂
ရသေ့တောင်မှာ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဆီဖုန်းတွေကို မယက ဥက္ကဌက လိုက်သိမ်းနေတဲ့အကြောင်း၊ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အကြောင်း M-Media သတင်းထောက် ဇာဏီက ရသေ့တောင်ကနေ ပေးပို့ ထားပါတယ်။
“ရသေ့တောင် ညောင်ပင်ကြီးမှာ မယက ဥက္ကဌ ဇေ၀ဏ္ဏလှိုင်က အဲဒီက လူတွေရဲ့ ဖုန်းတွေကို လိုက်သိမ်းနေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေမှာ ဖုန်းတွေ မရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။ ၀ှက်ထားတဲ့ ဖုန်းအနည်းငယ်နဲ့သာ ဆက်သွယ်နေရတယ်။”
ညောင်ပင်ကြီးက လူတွေကို နယ်မြေသစ် တောင်ပြိုကို နစက က ဇွတ်အတင်း ရွေ့ပြောင်းခိုင်းနေကြောင်းလည်းသတင်းရရှိပါသည်။